Atemmufo 9 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Abimelek bɛyɛɛ ɔhene wɔ Sekem (1-6)
Yotam akasabebu (7-21)
Abimelek dii ade atirimɔden so (22-33)
Abimelek kɔtow hyɛɛ Sekem so (34-49)
Ɔbea bi piraa Abimelek; owui (50-57)
9 Akyiri yi, Yerubaal ba Abimelek+ kɔɔ ne maame nua mmarima nkyɛn wɔ Sekem, na ɔka kyerɛɛ wɔne ne nanabarima abusuafo nyinaa* sɛ: 2 “Mepa mo kyɛw, mummisa Sekem mpanyimfo* nyinaa sɛ, ‘Nea ɛwɔ he na eye ma mo? Mopɛ sɛ Yerubaal+ mma mmarima 70 no nyinaa di mo so, anaa mopɛ sɛ onipa baako na odi mo so? Monkae sɛ meyɛ mo ara mo dompe ne mo honam.’”* 3 Enti ne maame nuanom no kɔkaa n’asɛm no kyerɛɛ Sekem mpanyimfo nyinaa, na wɔn koma dan kodii Abimelek akyi, efisɛ wɔkae sɛ: “Ɔyɛ yɛn ara yɛn nua.” 4 Ɛnna woyii nnwetɛbona 70 fii Baal-Berit+ abosomfi* de maa no, na Abimelek de bɔɔ mmarima akwasampafo bi a wonni dwuma bi di paa sɛ wonni n’akyi. 5 Afei ɔkɔɔ ne papa fi wɔ Ofra,+ na okokunkum ne nuanom,+ Yerubaal mma mmarima 70 no wɔ ɔbo baako so. Ɛkaa Yerubaal ba kumaa Yotam nko ara, efisɛ ɔde ne ho siei. 6 Enti Sekem mpanyimfo nyinaa ne Bet-Milofo nyinaa hyiae, na wosii Abimelek hene+ wɔ dua kɛse no ho wɔ edum a esi Sekem no nkyɛn. 7 Bere a nkurɔfo kɔkaa nea asi no kyerɛɛ Yotam no, ntɛm ara na okogyinaa Gerisim Bepɔw+ so, na ɔteɛɛm ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Sekem mpanyimfo, muntie me, na Onyankopɔn nso betie mo: 8 “Bere bi, nnua nyinaa kɔe sɛ wɔrekɔsra obi de no asi wɔn so hene. Enti wɔka kyerɛɛ ngodua sɛ, ‘Di yɛn so hene.’+ 9 Na ngodua bisaa wɔn sɛ, ‘Me ngo* a wɔde hyɛ Onyankopɔn ne nnipa anuonyam no, mopɛ sɛ migyae yɛ na mikodi nnua a aka no so hene* anaa?’ 10 Ɛnna nnua no ka kyerɛɛ borɔdɔma dua sɛ, ‘Bra bedi yɛn so hene.’ 11 Na borɔdɔma dua no bisaa wɔn sɛ, ‘Aba pa dɛdɛɛdɛ a mesow no, mopɛ sɛ migyae na mikodi nnua a aka no so hene anaa?’ 12 Afei nnua no kɔka kyerɛɛ bobe dua sɛ, ‘Bra bedi yɛn so hene.’ 13 Ɛnna bobe dua no bisaa wɔn sɛ, ‘Bobesa foforo a ɛma Onyankopɔn ne nnipa ani gye no, mopɛ sɛ migyae yɛ na mikodi nnua a aka so hene anaa?’ 14 Ewiee ase no, nnua no nyinaa ka kyerɛɛ nsɔe dua sɛ, ‘Bra bedi yɛn so hene.’+ 15 Ɛnna nsɔe dua ka kyerɛɛ nnua no sɛ, ‘Sɛ ɛyɛ ampa sɛ mopɛ sɛ mosra me si mo so hene a, ɛnde mommra me nwini ase mmɛhome. Na sɛ ɛnte saa a, ɛnde ogya mfi nsɔe dua mu na ɛmmɛhyew Lebanon sida nnua.’ 16 “Abimelek a mode no asi hene yi,+ enti mohwɛ a ɛfata, na efi mo komam paa? Mohwɛ a, mo ne Yerubaal ne ne fifo adi no yiye? Nea ɔyɛe no, ɛho akatua ni? 17 Bere a me papa ko maa mo no,+ ɔde ne nkwa* too ne nsam gyee mo fii Midian nsam.+ 18 Nanso ɛnnɛ, moasɔre atia me papa fifo, na moakunkum ne mma, mmarima 70 wɔ ɔbo baako so.+ Muwiei a, mode n’abaawa ba Abimelek+ asi Sekem mpanyimfo so hene, esiane sɛ ɔyɛ mo nua nti. 19 Enti nea mode adi Yerubaal ne ne fifo nnɛ no, sɛ ɛfata, na sɛ efi mo komam paa a, ɛnde munni Abimelek ho ahurusi na ɔno nso nni mo ho ahurusi. 20 Na sɛ ɛnte saa a, ɛnde ogya mfi Abimelek mu mmɛhyew Sekem mpanyimfo ne Bet-Milo+ mpanyimfo, na ogya mfi Sekem mpanyimfo ne Bet-Milo mpanyimfo mu mmɛhyew Abimelek.”+ 21 Afei Yotam+ guan kɔɔ Beer, na ne nua Abimelek nti ɔtenaa hɔ. 22 Na Abimelek dii Israel so hene* mfe abiɛsa. 23 Afei Onyankopɔn maa Abimelek ne Sekem mpanyimfo ntam sɛee,* na Sekem mpanyimfo ne Abimelek dii no nwenweenwene. 24 Ɔyɛɛ saa de tuaa kum a Abimelek kum Yerubaal mma mmarima 70 yayaayaw no so ka, na ama wɔn mogya abegu wɔn nua Abimelek ti so, efisɛ ɔno na okum wɔn,+ na asan abegu Sekem mpanyimfo ti so, efisɛ wɔn na wɔboaa no ma okum ne nuanom no. 25 Enti Sekem mpanyimfo maa nkurɔfo kɔtɛw Abimelek wɔ mmepɔw atifi, na obiara a obetwam wɔ wɔn nkyɛn no, na wogye ne nneɛma wɔ ɔkwan no so. Akyiri yi, nkurɔfo kɔkaa nea na wɔreyɛ no kyerɛɛ Abimelek. 26 Ɛnna Ebed ba Gaal ne ne nuanom betwaam kɔɔ Sekem,+ na Sekem mpanyimfo de wɔn werɛ hyɛɛ ne mu. 27 Na wɔkɔɔ wuram kɔtetew wɔn bobe mfuw mu aba, na wokyĩ de yɛɛ nsã, na wodii afahyɛ. Afei wɔkɔɔ wɔn nyame fi+ kodidi nomee, na wɔdomee Abimelek. 28 Na Ebed ba Gaal bisae sɛ: “Hena ne Abimelek, na hena ne Sekem a enti ɛsɛ sɛ yɛsom no? Ɔnyɛ Yerubaal+ ba, na Sebul nyɛ ne nanmusini? Monsom Sekem papa Hamor mma mmarima! Adɛn nti na ɛsɛ sɛ yɛsom Abimelek? 29 Sɛ ɔman yi hyɛ m’ase a, anka matu Abimelek ade so.” Na ɔka kyerɛɛ Abimelek sɛ: “Pɛ asraafo bebree na pue bra.” 30 Bere a Sebul a ɔyɛ kurow no birɛmpɔn tee Ebed ba Gaal asɛm no, ne bo fuwii. 31 Enti ɔfaa akyi somaa nnipa kɔɔ Abimelek nkyɛn kɔka kyerɛɛ no sɛ: “Hwɛ! Ebed ba Gaal ne ne nuanom aba Sekem, na wɔama kurom hɔfo nyinaa asɔre atia wo. 32 Enti wo ne nnipa a wɔka wo ho no mforo mmra anadwo, na monkɔtɛw wuram. 33 Sɛ owia pue anɔpa pɛ, sɔre ntɛm na tow hyɛ kurow no so; na sɛ ɔne ne dɔm pue ba wo so a, yɛ nea wubetumi biara di no so nkonim.”* 34 Enti Abimelek ne wɔn a wɔka ne ho nyinaa sɔree anadwo, na wɔkyɛɛ wɔn mu akuw anan, na wɔkɔtetɛw Sekem. 35 Bere a Ebed ba Gaal pue kogyinaa kurow no pon ano no, Abimelek ne nkurɔfo a ɛka ne ho no pue fii baabi a wɔkɔtɛwee no. 36 Bere a Gaal huu nkurɔfo no, ɔka kyerɛɛ Sebul sɛ: “Hwɛ! Nnipa bi fi mmepɔw no atifi resian.” Nanso Sebul ka kyerɛɛ no sɛ: “Ɛyɛ mmepɔw no sunsuma na wuhu no sɛ nnipa no.” 37 Akyiri yi Gaal san kae sɛ: “Hwɛ! Nkurɔfo bi fi asaase no mfinimfini reba, na kuw baako nam Meonenim dua kɛse no kwan so reba.” 38 Ɛnna Sebul ka kyerɛɛ no sɛ: “Ɛnyɛ wo na na woredwa w’anom sɛ, ‘Hena ne Abimelek a ɛsɛ sɛ yɛsom no’+ no? Ɛnyɛ saa nkurɔfo yi na wopoo wɔn no? Afei pue kɔ na wo ne wɔn nkɔko.” 39 Enti Gaal dii Sekem mpanyimfo anim ne Abimelek kɔkoe. 40 Na Abimelek taa Gaal, na oguanee, na wokunkum nnipa pii guu hɔ ara kosii kurow no pon ano. 41 Afei Abimelek kɔɔ so tenaa Aruma, na Sebul+ pam Gaal ne ne nuanom fii Sekem. 42 Ade kyee no, nkurɔfo no pue kɔɔ wuram. Na ebinom kɔka kyerɛɛ Abimelek. 43 Enti ɔfaa nkurɔfo no, na ɔkyɛɛ wɔn mu akuw abiɛsa, na wɔkɔtetɛw wuram. Na bere a ohui sɛ nnipa no apue afi kurom hɔ reba no, ɔtow hyɛɛ wɔn so kunkum wɔn. 44 Na Abimelek ne kuw a wɔka ne ho no bɔɔ twi kogyinaa kurow no pon ano, na akuw abien no nso kɔtow hyɛɛ wɔn a wɔwɔ wuram no nyinaa so kunkum wɔn. 45 Na Abimelek ne kurow no mufo koe da mu no nyinaa, na ɔfaa kurow no. Afei okunkum nnipa a wɔwɔ hɔ no, na ɔsɛee kurow no,+ na ɔde nkyene petee hɔ nyinaa. 46 Bere a Sekem abantenten mu mpanyimfo tee no, ɛhɔ ara na wɔkɔhyɛɛ El-Berit fi*+ ahintawee* mu. 47 Bere a nkurɔfo kɔka kyerɛɛ Abimelek sɛ Sekem abantenten mu mpanyimfo no nyinaa aboa wɔn ano no, ɛhɔ ara na 48 Abimelek ne mmarima a wɔka ne ho no nyinaa kɔɔ Salmon Bepɔw so. Na Abimelek faa abonnua de twaa dua dubaa bi, na ɔmaa so too ne kɔn ho. Afei ɔka kyerɛɛ nnipa a wɔka ne ho no sɛ: “Nea muhui sɛ mereyɛ no, obiara nyɛ ntɛm nyɛ bi!” 49 Enti nnipa no nyinaa nso twitwaa nnubaa de dii Abimelek akyi. Na wɔde beguu ahintawee a ɛwɔ aban no ase no ho, na wɔde ogya toom. Enti nnipa a wɔwɔ Sekem abantenten no mu nyinaa nso wuwui, mmarima ne mmea bɛyɛ 1,000. 50 Afei Abimelek kɔɔ Tebes. Ɔkaa nnipa no hyɛɛ Tebes kurow no mu, na ɔko fae. 51 Ná abannennen bi wɔ kurow no mfinimfini, enti mmarima ne mmea ne kurow no mu mpanyimfo nyinaa guan kɔhyɛɛ hɔ, na wɔtoo mu foro kɔɔ aban no atifi. 52 Abimelek kɔɔ aban no ho sɛ ɔrekɔbɔ awura mu. Na ɔkɔɔ aban no pon ano sɛ ɔde ogya rekɔto mu. 53 Ɛnna mmea no baako gyaa ɔbo a wɔde yam ade mu bɛhwee Abimelek tirim maa ne tikora mu paee.+ 54 Ntɛm ara na ɔfrɛɛ n’akoa a okura n’akode no ka kyerɛɛ no sɛ: “Twe wo sekan kum me, na nkurɔfo anka sɛ, ‘Ɔbea na okum no.’” Enti n’akoa no de ne sekan wɔɔ no ma owui. 55 Bere a Israel mmarima no hui sɛ Abimelek awu no, obiara san kɔɔ ne fi. 56 Enti bɔne a Abimelek de yɛɛ ne papa a ɛne sɛ okunkum ne nuanom 70 no, Onyankopɔn tuaa no ka.+ 57 Afei nso, bɔne a Sekem mmarima yɛe nyinaa, Onyankopɔn ma ɛbaa wɔn ankasa ti so. Enti Yerubaal+ ba Yotam+ nnome no baa wɔn so.
^ Nt., “ne papa maame fi abusua.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “nsaasewuranom.”
^ Anaa “me ne mo yɛ mogya baako.”
^ Anaa “aba pii a mesow.”
^ Nt., “mikohinhim me ho wɔ nnua a aka no so.”
^ Anaa “Abimelek yɛɛ ne ho sɛ obirɛmpɔn wɔ Israel so.”
^ Nt., “Onyankopɔn somaa honhommɔne baa Abimelek ne Sekem mpanyimfo ntam.”
^ Anaa “nea wo nsa betumi biara, fa yɛ no.”
^ Anaa “abannennen.”